बालकोटमा केपी ओलीले बिगतका दुखका कुरा सुनाउदै सिलवाललाई दिय ठुलो खुसि .. पुरा हेर्नुहोस – नेपाली सूर्य
December 20, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on बालकोटमा केपी ओलीले बिगतका दुखका कुरा सुनाउदै सिलवाललाई दिय ठुलो खुसि .. पुरा हेर्नुहोस
बालकोटमा केपी ओलीले भने– म प्रधानमन्त्री, नवराज सिलवाल गृहमन्त्री !
काठमाण्डु, ५ पुस– अदालतमा किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चल्दै थियो । नवराज सिलवाल स्थानीय निकायको निर्वाचनको केही समयअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगे । ओलीको कुरा सुनेर सिलवाल चकित भए । ‘भात खान छाड्नुभयो कि के हो ? निकै दुब्लो पातलो देख्छु त ?’, ओलीले कुराको सुरुआतै यसरी गरे । सिलवालले प्रहरी पोशाकमा भन्दा सादा पोशाकमा मानिसलाई दुब्लो देखिने जवाफ दिए ।
ओलीले राज्यले अन्याय गरे पनि नआत्तिन भन्दै सिलवाललाई ढाडस दिए । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्दा आफूले १४ वर्षसम्म कठोर जेल सजाय भोगेको देखि दुवै किड्नी म्यामेज भएर अरुकै किड्नी राखेर बाँचिरहेको भन्दै सिलवाललाई सान्त्वना दिए । ‘१४ वर्ष जेलको कठोर यातना सहें, किड्नी ड्यामेज भयो । अर्कैको किड्नी राखेर बाँचिरहेको छु’, ओलीले भने, ‘अझै त देशका लागि केही गरौंला भन्ने सोच छ भने तपाईं किन आत्तिनु हुन्छ ?’ ओलीका कुरा सुनेर सिलवाल एकाएक ‘कन्भिन्स’ भए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा आफ्ना पक्षमा विशेष समय लिएरै संसदमा कुरा उठाएपछि सिलवाल ओलीप्रति धेरै नै नतमस्तक बनेका थिए । त्यही कारण अभिभावकजस्तो लागेर उनी भेट्न गएका थिए । ओलीले कुरा गर्दै जाँदा फ्याट्ट भने, ‘अब मंसिरमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नवराज सिलवाल गृहमन्त्री ।’ कुरा सुन्दै अचम्म ।
प्रहरीको महानिरीक्षक हुन नसकेर रोइकराई गरेर हिंडेको मानिस ५/७ महिनापछि देशकै गृहमन्त्री कसरी सम्भव होला र ? सिलवाल खिस्स हाँसे मात्र । नभन्दै मंसिरमा चुनाव भयो । एमाले पहिलो पार्टी पनि बन्यो । ओली प्रधानमन्त्री पनि बन्ने भए । सिलवाल सांसद बने । मन्त्री बन्नका लागि सांसद पद पर्याप्त हो । तर, सिलवाल गृहमन्त्री भने नुहने भए । कारण, बाम गठबन्धनको सरकारमा गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । गृहमन्त्री बन्दैछन् माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन । –काठमांडूटुडेबाट
ओली नै प्रधानमन्त्री , भयो एक किसिमको सहमति ! एमालेबाट मन्त्री बन्दै छन् यी अनुहार ! (सूचिसहीत) पुरा हेर्नुहोस
महोत्तरीमा घरबाट हराएका बालक पोखरीमा सिकिस्त भेटियो, अस्पताल पुर्याउँदा मृत घोषणा
July 25, 2021 Nepali Surya
बारा-पर्साका आँधी प्रभावितलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक करोड सहयोग
April 2, 2019 Nepali Surya